त्यसपछि दौडिन थाले – Rajdhani Daily
त्यसपछि दौडिन थाले
पहिलोदेखि नै नेपाली सेना एकदमै मनपर्ने । एकै ड्रेसमा बन्दुक र ब्याग बोकेर लाइनमा हिँडेका सेना देख्दा पनि त्यस्तै बन्ने हुटहुटी । २०६८ मा पहिलोपटक प्रयास गरे । तर, त्यसबेला सफल भएनन् । अर्को वर्षको प्रयासमा सफल भए । मनपर्ने ठाउँमा छिरेपछि उनले सानैदेखिको रुचि भएको खेललाई पनि छाड्न चाहेनन् । भित्रभित्रै आर्मीबाट कसरी खेल्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता बनाए । यही मानसिकता बोकेका छोटो दूरीका धावक सोमबहादुर कुमाल खेल यात्राको व्यावसायिक सुरुवात गर्न सफल भए । सेनामा प्रवेशसँगै उनले बाहिनी खेलकुद हुने बेलामा दाइहरू अभ्यास गरिरहेको देखेपछि नजिकै रहेका दाइलाई भने, ‘दाइ, म पनि दौडिन्छु नि । दाइले ल, दौडिन न त हेरौं भने । पहिलो प्रयासमै मैले बाहिनी पृतनामा पहिलो भएकालाई हराइदिएँ । त्यसपछि हाम्रो कमान्डरले तँ त मज्जाले दौडिँदो रहेछस् । अब खेल परेडमा निस्की, भोलि छनोट छ, दौडिन आइज ।’
कमान्डरले नै यति भनेपछि उनलाई अब के चाहियो र ? उनले छनोटमा दौडने योजना बुने । छनोटमा उनले सोचेजस्तै भयो । बाहिनीमा भएका सबै खेलाडीलाई हराएर पहिलो भए । त्यसपछि बाहिनीबाट पृतना हुँदै आर्मी क्लबमा आए । मान्छेको मन न हो । आवश्यकता असीमित हुन्छन् । क्लब छिरेसँगै उनले राष्ट्रिय खेलाडी बन्ने सपना देखे । नेपालकै पहिलो हुने महत्वाकांक्षा जागिसकेका उनले आर्मीमा जिते । अब राष्ट्रियस्तरमा नै जित्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यमा अघि बढे । यसमा उनले सफलता पाए । उनले एथलेटिक्सका राष्ट्रिय प्रतियोगिता जितिरहने, कीर्तिमान बनाइरहने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतिस्पर्धा गर्ने
बाटो खुलाइरहे ।
एथ्लेटिक्सका कीर्तिमानी खेलाडी सोमबहादुर कुमाल २४ वर्षअघि गोरखा नगरपालिकाको ११ किलोमा जन्मिएका हुन् । साधारण परिवार । बुबा केही समय वैदेशिक रोजगारीमा यूएई र भारत गए । खेती किसानी मुख्य पेसा हो । बाल्यकालमै धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले खेलमा त्यति सारो ध्यान नै गएन ।
‘सानो बेलामा धेरैले खेल्ने खेल त फुटबल नै होला । मैले पनि त्यही खेले । महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पढें । स्कुलमा बेलाबखत दौड प्रतियोगिता भइरहन्थ्यो । म कहिल्यै कुदिनँ । अरू कुदेको भने खुब चाख मानेर हेर्थें । कस्तो घोडा कुदेको जस्तै कुदेको होला भन्ने कौतूहलतामा म पनि त्यसरी दौडन सक्छु होला त भन्ने सोच्थें । तर, १९ वर्षको हुँदासम्म पनि मैले कुनै पनि प्रतियोगितामा भाग लिइनँ । आर्मीमा छिरेपछि नै मेरो खेलको करियर अघि बढेको हो,’ बाल्यकाल सम्झिए ।
सोम २०६९ मा आर्मीमा छिरे । आर्मीमा छिरेपछि नै उनको खेल यात्राले गति लियो । भर्ती भएपछि आर्मीको प्रशिक्षणपछि उनी गणमा फर्किए । आर्मीहरूको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि हुने छनोट खेल उनले देखे । त्यतिबेला ४००, ८०० र १५०० मा छनोट भइरहेको थियो । प्रशिक्षण गराइरहेका गुरुलाई ‘म पनि दौडिन्छु नि’ भने । गुरुले अनुमति दिएपछि उनले दौडिने प्रण गरे । पहिलो प्रयासमै बाहिनी पृतनामा पहिलो भएकालाई हराइदिए । सेनापति ट्रफीमा दोस्रो भएपछि उनले क्लबको यात्रा तय गरे । ०७२ सम्म उनले मुक्ति खड्कालाई हराउन सकेन ।
कमान्डरले नै यति भनेपछि उनलाई अब के चाहियो र ? उनले छनोटमा दौडिने योजना बुने । छनोटमा उनले सोचेजस्तै भयो । बाहिनीका सबै खेलाडीलाई हराएर पहिलो भए । त्यसपछि बाहिनीबाट पृतना हु“दै आर्मी क्लबमा आए
‘त्यही समय कीर्तिमानी धावक धनीीराम चौधरीसँग अभ्यास गर्न पाएको थिएँ । दुई वर्षसम्म म दोस्रोबाट उक्लिन सकिनँ । पहिलो हुन जति नै मिहिनेत गरे पनि सफल हुन सकेको थिइनँ । आर्मी क्लबमा परेको दुई वर्षपछि ०७२ सालमा १२औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको तयारीका लागि भएको प्रतियोगितामा भने मैले मुक्तिलाई पहिलोपटक हराएँ । त्यो बेला मैले आठ सय मिटर र चार सय मिटर दुवैमा स्वर्ण पदक जितेको थिएँ,’ उनले भने । त्यस समयदेखि आर्मीका प्रतियोगिता र राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगितामा ४ सय र ८ सय मिटर दौडमा लगातार उत्कृष्ट हुँदै स्वर्ण जित्न सफल भए ।
‘पहिलोपटक स्वर्ण जित्दा असाध्यै खुसी लागेको थियो । त्यो गर्वको क्षणमा पाएका मेडल अहिलेसम्म हेर्दा पनि ऊर्जा मिल्छ । घरको भित्तामा मेडलसँगै आफूलाई राम्रो लागेका तस्बिरहरू सजाएर राखेको छु । १२औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको ८ सय मिटर दौडमा त्यो अनुभव पनि लिन पाएँ । पदक नजिते पनि आफ्नो समय सुधार भने गरेको थिएँ । आठ सय मिटर दौड १ मिनेट ५५ सेकेन्डमा पूरा गरेको थिएँ । भारतमा भएको दक्षिण एसियाली खेलकुदपछि लगातार अभ्यासमा ध्यान दिइरहें । भारतकै लखनउमा भएको इन्डियन ओपन एथलेटिक्स च्याम्पियनसिप र ब्रुनाईमा भएको ब्रुनाई ओपन एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपमा पनि सहभागी भएँ,’ उनले भने ।
भारतमा पदक नजिते पनि ब्रुनाईमा ८ सय मिटरमा स्वर्ण र चार सय मिटरमा रजत पदक जिते । माल्दिभ्समा ८ सय र ४ सय मिटर दुवैमा स्वर्ण जितेर नेपालको झन्डा लिएर विदेशी भूमिमा स्वर्ण जित्दाको खुसी शब्दमा बयान गर्न कठिन हुन्छ । उनले थपे, ‘अन्य देशमा अभ्यास र सुविधा राम्रो हुने हुनाले उनीहरूको प्रदर्शन राम्रो भइरहेको हुन्छ । हामी भने जे छ, त्यसमा नै भिडिरहेका हुन्छौं । नेपालमा खेलाडीहरू प्राकृतिक रूपमा नै बलिया हुन्छन् जस्तो लाग्छ ।’
बिर्सन नसक्ने त्यो क्षण
उनी अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा बिर्सनै नसक्ने क्षण इन्डोनेसियामा भएको १८औं एसियाली खेलकुद रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘१५ दिन त म टाइफाइडले थलिएँ । सीमित कोटा भएकाले म छनोट हुने पक्का जस्तै भए पनि म छनोट हुन सफल भए । हामी यति महत्वपूर्ण
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा जाँदा पनि तयारीमा कति बेवास्ता गर्छौं भन्ने कुरा एसियाली खेलकुदका बेला मलाई परेको घटनाबाट पनि थाहा हुन्छ । जसोतसो एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुन गइयो । म ४ सय र ८ सय मिटर दौडमा सहभागी हुँदै छु भन्ने जानकारी पाएको थिएँ । त्यसका लागि राम्ररी तयारी गरिरहेको थिएँ । तर, उता पुगेपछि चार सय मिटरमा नाम नै रहेनछ,’ उनले तीतो अनुभव सुनाए ।
‘यत्रो अभ्यास गरेर पनि खेल्न नपाउँदा एकदमै दुःख लाग्यो । दौड सुरु हुन अघिसम्म पनि वार्मअप गरेर बसिरहेको थिएँ, तर नाम नै आएन । आठ सय मिटरमा भने मेरो नाम छुटेको रहेनछ,’ उनले भने, ‘एसियाका उत्कृष्ट खेलाडीमाझ जसरी पनि राम्रो गर्ने हुटहुटी चल्यो । दौड सुरु भयो । सुरुमा अलि पछाडि बसेर पछि पेल्नुपर्छ भन्ने सोचेको थिएँ । तर, उनीहरूले नै सुरुमा अलि ‘स्लो’ गरें । त्यसपछि मैले टाइमिङ निकाल्नुपर्छ भनेर तीव्रता बढाएँ । तीन सय मिटरतिर पुग्दा म अलि अगाडि बढें । चार सय मिटरमा पुग्दा मभन्दा अगाडि कतारको खेलाडी मात्रै थिए । दुई सय मिटर बाँकी हुँदा एसियाभरको दोस्रो नम्बरमा छु भन्ने सोच मेरो मनमा एक्कासि आयो । तर, त्यसको केही समयमा त म चौथो नम्बरमा धकेलिएँ ।’
उनले थपे, ‘जेनतेन राष्ट्रिय कीर्तिमान बन्यो । त्यसबेला टाइमिङ १ मिनेट ५० सेकेनड २५ पल्स थियो । त्यसअघि १ मिनेट ५० सेकेन्ड ६० पल्सको राष्ट्रिय कीर्तिमान गुरु धनीराम चौधरीको नाममा थियो ।’
एसियन एथ्लेटिक्स च्याम्पियनसिपको मितिसँग आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति जुधेपछि उनले आठौं राष्ट्रिय खेलकुद गुमाउने भएका छन् । तर पनि उनले आठौंलाई सकभर नगुमाउने योजना बनाएका छन् ।
Tags: त्यसपछि दौडिन थाले
काठमाडौं । नेप्लिज फेडरेसन अफ बडी बिल्डिङ तथा फिट्नेसको २ खेलाडीसहित ४ सदस्यीय नेपाली टोली ५३औं एसियाली शारीरिक सुगठन च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन बुधबार चीनको हर्बिन जाने भएको छ । जुलाई २६ देखि...